INDEX, MATCH, Sarudza - Matipi - Tepe RELAY
INDEX, MATCH, Sarudza - Matipi
Kudzidziswa kwepamhepo: kuve nyanzvi mune zvetsika kubira -…
Yokupedzisira yakagadziridzwa pane 1 Nyamavhuvhu 2020 pa03: 23 ndima Raymond PENTIER
Ichishandiswa chete, iyo INDEX neMATCH mabasa hazvinei nekufarira; asi yakabatana, ivo vanobvumira kunoshamisa kutsvagurudza.
Basa rekusarudza, asi riri nyore kushandisa, rinoshandiswa zvishoma.
Aya mabasa anotsanangurwa zvakadzama mudzidzo, maforamu, mablogiki, kurovedzwa pamhepo. Asi takazviona zvakakodzera kuti tivaswededze pamwe chete mune akafanana mapeji sheet. https://www.cjoint.com/c/JHbbkuHnIFB
KUSARUDZA - Iri basa rinoshandiswa kuratidza kukosha zvinoenderana nehuwandu hwe index:
= Sarudzo (N °; val1; val2 ...)
Nhamba yacho inofanira kunge iri pakati pe1 kusvika 254; inoronga kukosha kwekupokana kusarudza.
Iko kukosha kunogona kuve kwechitokisi chechitokisi, formula, chinyorwa, nhamba (yechikamu, iyo chikamu chose) ...
Nekubatanidza mabasa, akasiyana siyana matambudziko anogona kugadziriswa.
Tafura isina kukwana
Mafaira ane hukama
Iwe unogona kushandisa nenzira yakakodzera kune OFFSET mashizha anoshanda:
OFFSET, ine INDEX uye MATCH - 28 / 05 / 20
TELES RELAY 16933 Posts 1 mashoko
Alain Chabat: mwanasikana wake Louise anodhira rant hombe pamusoro pemiktats yekuonda
Iyi ndiyo Best Buy yekupedzisira yekutengesa yakakura yemwedzi, uye iwe haudi kuipotsa - BGR